ညီလင်းသစ်: ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့်မှာ ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 4.1.12
အကို ကြုံခဲ့သလိုပဲ သေခြင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ၂၀၁၁ အကုန်ပိုင်းမှာ ကျမလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်အဖေ နှလုံးရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လေ။ နောက်ပြီး အကိုရေးထားတဲ့ သူတွေ။ တကယ်ကို ကိုယ်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ကြီးကို ဖြစ်ပျက်လာနေတဲ့အတွက် ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ထားပြီးပြီလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေလဲ ဝင်လာစေခဲ့တယ်။ သားသားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကိုတို့ ဇနီးမောင်နှံ ထိန်းကျောင်းသွန်သင်မှုကို တကယ်ပဲ သဘောကျမိတယ်။ သားသားအကြောင်းတွေ ဖတ်တိုင်း တူမလေးကိုလည်း ပိုပိုပြီး သတိတွေ ရနေမိတယ်။ နှစ်သစ်မှာ အကိုတို့မိသားစု ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Purple Vine ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ လူတွေသေနေပေမယ့် ထင်ရှား တဲ့သူတွေ၊ ရင်းနှီးသူတွေ သေရင်တော့ သေခြင်းကို ပိုပြီး အမှတ်ရစရာ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်ဗျာ..။
ကျမဘ၀မှာ မိသားစုဝင်တွေရဲ့သေခြင်းတရားတွေကို စိတ်ခြောက်ခြားမှုများစွာ ကြေကွဲမှုများစွာနဲ့ ရင်ဆုိုင်ခဲ့ရ
လို့ မကြာခဏသေခြင်းတရားကိုသတိတရရှိမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေ့ စဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ မေ့လုိုက်သတိရ လိုက်ပါ။ သားသားကုိုအခုအချိန်ပေးခဲ့တာကုိုဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာမဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အနောက်နုိုင်ငံမှာကြီးပြင်းလာမဲ့သားလေးစီက အိုမင်းလာမဲ့အဖေတယောက်ကို အချိန်တွေပြန်ပေးလာနုိုင်လိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားဘူးလို့ လည်းတွေးမိပါတယ်။ တွေးစရာလေးတွေ အမြဲပေးတဲ့စာကိုဖတ်ရလို့ ကျေနပ်မိပါတယ်။
နှစ်သစ်ပေါင်းများစွာကို မိသားစုနဲ့ အတူပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနုိုင်ပါစေလို့ ။
မိဘတွေဟာ ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် သားသမီးတွေကိုအချိန်မပေးနိုင်တာကနေ မေတ္တာတွေဝေးကွားလာကြတယ် ..
သားသမီးတွေကိုအချိန်ပေးပျိုးထောင်နိုင်တဲ့ မိဘတွေနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးတွေကျတော့လဲ နွေးထွေးတယ်.
အင်း ကျနော်တို့လဲဘယ်လိုလာမလဲမသိပါဘူး ဗျာ
ဒါပေမယ့် သားသမီးအပေါ်မှာအချိန်ပေးပျိူးထောင်နိုင်တဲ့ မိဘတော့ဖြစ်ချင်တာအမှန်ဘဲအကိုရေ ..
ဘာပဲပြောပြော နှစ်သစ်မှာ မိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာကူးပြောင်းခွင့်ရတာကိုက ကုသိုလ်ကောင်းနေတာဘဲမဟုတ်လားနော်
2011 နှစ်ကုန် ကျောင်းပိတ်တော့ သားကြီးက အရင်စောပိတ်တော့ သူ့အဖွားနဲ့ အယင်ပြန်သွားနှင့်တယ်။ အမကတော့ သားငယ် စာမေးပွဲပြီးသည်အထိစောင့်ပြီးတော့မှ သားငယ်နဲ့ အတူ ပြန်ရတယ်။ ဟိုကိုရောက်နှင့်တဲ့ သားကြီးက သူ့ဘကြီး ဦးလေး အဒေါ်တွေကို ကြိုတိုင်ထားနှင့်တယ်... ဖေဖေနဲ့ မေမေကလည်း သူတို့ ဘလော့ဂ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတာပါတဲ့ သားတို့ကိုအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့...ကဲ...
ဒီဘက်ရက်ပိုင်းတွေမှာ အစ်မ ခဏခဏ တွေးနေမိပြီး အစချီထားလျက်နဲ့ ဆက်မရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာက သေခြင်းတရား..ပဲ။ပီးတော့ Teen ဖြစ်လာတဲ့ သမီးတကောင်ကို အချိန်ပေးဖို့ အာရုံပေးဖို့တွေနဲ့ မောနေတဲ့အချိန်...။
အစ်မလည်း ခု မောနေတာပါပဲ...
နောက်ထပ် နှစ်အနည်းငယ်ဆို သားက ကျနော့်ကို သူနဲ့တချိန်လုံး ကစားဖို့ ခေါ်ချင်မှ ခေါ်တော့မယ်၊ သူ့ကို သီချင်းဆိုသိပ်ပါဦး လို့လည်း ပြောချင်မှ ပြောတော့မယ်၊
မပြောဖို့ သေချာသလောက်ဘဲ သူတို့မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တွေ များလာပြီလေ သူတို့ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ မိဘ တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ အကူးအပြောင်းနဲ့အတူ အပြောင်းအလဲတွေကို သတိသံဝေဂအများကြီးရမိတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့သားအပေါ် ကိုတွေးနေတဲ့အချိန်တွေမှာ တပြိုင်တည်းဆိုသလို အဝေးက အိုမင်းလာတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကိုလည်း အရမ်းသတိရမိတယ်မဟုတ်လား။
သားလေး လိုအပ်တုံးမှာ ဝအောင် တူတူဆော့ထားဗျို့ 
နည်းနည်းလည်းကြီးလာရော သူတို့ ဘာသာနေတော့မှာ ဟိဟိ။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ကိုညီ ..
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပစ္စပ္ပုန် တည့်တည့်ပဲ အကို...
သဘောထားခြင်း တိုက်ဆိုင်ပါတယ် :)
ရောက်ရောက်လာတယ်။ အသက်တွေ ကြီးလာသလို၊
နေ့ စဉ်ဖြစ်နေတဲ့ကြိုက်တာ၊မကြိုက်တာတွေ ကိုပြန်မရ
တော့ပဲ ထားခဲ့ရတာ၊ ရှေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေးထား
လို့ မရတာတွေကို တွေးမိရင်း.......
ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟတွေ လျှော့ပြီး အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေမယ်လို့၂၀၁၂
ကိုညီတို့ မိသားစု ကျန်းမာပျှော်ရွှင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ပြောင်းလဲခြင်းတွေထဲမှာ ကျနော်တို့ သတိမထားလိုက်မိပဲ ခပ်မြန်မြန်ပြောင်းသွားတာတွေထဲမှာ အချိန်လည်း ပါတယ်ဗျ တစ်ခါတလေ . ဟ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ငါ့နှယ် ဘာမှတောင်မသိလိုက်တာ အသက်တစ်နှစ်ကြီးပြန်ပြီလို့ ။
သားလေး ကို အချိန်ပေးတာကောင်းပါတယ် အစ်ကိုရာ ညီဆို မပြည့်စုံပေမယ့် မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းလေး နေခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကို ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးတယ် ။ အဘ က ညီ့ကို ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ မ၀ယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ဒါပေမယ့် အဘ ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးခဲ့တ သစ်သားလှေရုပ်ကလေးဟာလည်း ညီ့အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာလေးတစ်ခုဖြစ်သလို ရယ်ဒီမိတ် တံဆိပ်ကောင်းတွေမဟုတ်ပေမယ့် အမေ့အပ်ချုပ်ရာလေးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အဖြူရောင်အကျီ င်္လေးတွေကိုလည်း ညီ စွဲစွဲမြဲမြဲ ၀တ်တတ်ခဲ့တယ် ။
လူမချမ်းသာခဲ့ပေမယ့် ချစ်ခြင်းတရားတွေ အလျှံပဲရှိတဲ့ မိဘနှစ်ပါးရှိခဲ့တဲ့ အဖြစ်က ခုထိ ညီ့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ပြုံးပျော်စေတယ် အစ်ကို ။ သားလည်း ညီတို့ အရွယ်ရောက်ရင် ခံစားချက်တွေခြင်းတူမယ်ထင်ပါတယ်။
မိသားစုတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ ။
အချိန်ပေးနိုင်တာ မိဘတွေအတွက်ရော သားလေးအ
နှစ်အနဲငယ်ဆို သားလေးက သူနဲ့ဆော့ဖို့ခေါ်တော့မယ်
လူကြီးအတွက်တင်မက ကလေးတွေအတွက်ပါ ဆွဲဆောင်
နော်....။နှစ်သစ်မှာ အစ်ကိုတို့မိသားစုတွေ ကျမ်းမာပျော်ရွင်ကြပါစေဗျား....။အပေါ်က ကွန်မန့်က
ယောက်ရဲ့ ဘလ မှာ သူ့အတွက်(သူ့နာမည်နဲ့)ပို့စ်တင်
တကယ်တော့ သားသမီးတိုင်းအတွက် မိဘတွေက လမ်းပြကြယ်တွေလို့ ထင်တာပါဘဲ အစ်ကို... အစ်ကိုပြောသလိုပေါ့ မိဘတစ်ယောက် အနေနဲ့ သားလေးကို လူ့ လောကထဲ ခေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တော့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမဲ့ တာဝန်ရှိလာပြီပေါ့။ မိဘတိုင်းကတော့ သား၊ သမီးတိုင်းအတွက် ဖခင်ကောင်း၊ မိခင်ကောင်း ဖြစ်ချင်ကြတာချည်းပါဘဲ။ အစ်ကို့ သားလေးးအပေါ် ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့ အစ်ကို့ ကိုလဲ အစ်ကို့ သားလေးက ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်လို့ မှတ်ယူနေမှာပါ... ကျွန်တော်လဲ အဲဒီလိုဘဲ ယုံကြည်ပါတယ်... နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ အစ်ကို...
နှစ်သစ် အားလပ်ရက်မှာ အိမ်မှာနေပြီး သားကို အချိန်ပေးခွင့်ရတာ ကံကောင်းပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။
ငယ်ကတည်းက မိဘကအချိန်ပေးပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး ဂရုစိုက်ပေးလာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ မိဘက ဂရုမစိုက်ဘဲ ကြီးပြင်းလာရဲ့တဲ့ ကလေးတွေထက် စာရင် သူကြီးပြင်းလူလားမြောက်ချိန်မှာလည်း သူတစ်ပါးကို ချစ်ခင်တွယ်တာစိတ်၊ ငဲ့ညှာသနားစိတ်နဲ့ မိသားစုကိုခင်တွင်စိတ်တွေ ပိုရှိတတ်တယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ သားလေး ကံကောင်းပါတယ်
သူ့ကို ဂရုစိုက် အချိန်ပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက် သူ့မှာ ရှိနေတာကိုပေါ့။
နှစ်သစ်မှာ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာပါစေကိုညီလင်းသစ်ရေ.
ဟုတ်တယ်နော် ကိုညီလင်းသစ် ခုက အပြောင်းအလဲမြန် အချိန်တွေကုန်ဆုံးမြန်လွန်းတယ်။ ဒီလိုအချိန်တိုတိုအတွင်းကိုယ်ပေးနိုင်သမျှအရာကို မကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေဆီဝေမျှနိုင်တာ မင်္ဂလာပါပဲ...။ နှစ်သစ်မှာ ကိုညီလင်းသစ်တို့ မိသားစုလေး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာနဲ့ ခရီးအရှည်ကြီးကို ဆက်နိုင်ပါစေ...။
ကရိကထ များတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် တခါတခါကျတော့ အိမ်ကသားကို ကိုညီလင်း သားလို အတူတူ ဆော့လို့ရတဲ့ အရွယ်လေး ပြန်ဖြစ်စေချင်မိတယ်...
Teen ဖြစ်နေတဲ့ သားက အရင်ကလို အမေနား ကပ်ပြီး တိုးဝှေ့နေတဲ့ အချိန်တွေ နည်းသွားလိုက်တာ သိသိသာသာ...
စာကောင်းကောင်းဖတ်တတ်နေပြီဆိုတော့ စာဖတ်ပေးဖို့လည်း မလိုတော့ဘူး... ကွန်ပျူတာ တလုံးလုံး ရှိနေတော့ သူနဲ့အတူတူ လာကစားပေးဖို့လည်း မခေါ်တော့ဘူး... ကျောင်းသွားခါနီး အဝတ်ဝတ်ပေးဖို့ ကြယ်သီးကူတပ်ပေးဖို့ necktie လေး တည့်ပေးဖို့... ဒါမျိုးတွေလည်း မလိုအပ်တော့ပြန်ဘူး...
မိဘဆိုတာကတော့ သူတို့ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီ ပံ့ပိုး ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပါပဲလေ လို့ စိတ်ကို ဖြေတွေးရတယ်...း(
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ၂၀၁၂ ပါ ကိုညီ မအိမ်သူနဲ့ သားလေးရေ...း))
ဟုတ်ပါတယ်၊ သေခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ inner sphere ကို ရောက်လာတဲ့အခါ ပိုပြီး ဆင်ခြင်မိမယ် ထင်တယ်နော်၊ အချိန်တခု လွန်တော့လည်း နည်းနည်း မေ့ချင် မေ့မိမှာ ပေါ့လေ...၊
အေးဗျာ၊ နှစ်သစ်ကို စုံညီစွာ ကူးပြောင်းခွင့်ရတာပဲ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊ ညီမတို့လည်း အစစ အဆင်ပြေပါစေနော်...၊
ဟောဗျာ..၊ သားတွေကတောင် ပြောစရာ ဖြစ်ကုန်ပြီလား၊း) ဒါဆိုလည်း သူတို့ပြောတာနဲ့ ကာမိအောင် ပို့စ်အသစ်လေးတွေသာ တင်ပလိုက် တော့ဗျာ... နော..၊း)
အမေရိကားမှာ Teen ဖြစ်လာတဲ့ သမီးတစ်ကောင်ကို မောင်းရတာ ရွာမှာ နွားတစ်ထောင်ကို ကျောင်းရတာ နဲ့များ သွားညီနေ မလားပဲ၊း) မောမောနဲ့သာ ခရီးဆက် ရမှာပဲ အမရေ့...၊ ဟုတ်ဖူးလား?
ဟုတ်တယ်အမ၊ သူတို့ လိုအပ်ချိန်မှာ ရှိနေပေးဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ..၊
သေချာတာပေါ့ဗျာ၊ ကြွေးသစ်ကို ချနေတုန်းမှာပဲ ကြွေးဟောင်းကိုလည်း သတိရနေမိ ပါတယ်...၊
ဟုတ်တယ်၊ အခုထက် နည်းနည်း ပိုကြီးလာရင်တော့ Wii တစ်ခုဝယ်ပြီး သူနဲ့ ဆက်ကစား မလားလို့..၊း) Btw, စာတွေ ဆက်ရေးပါဦး ညီမရေ..၊
ဟုတ်ကဲ့၊ ဂလိုဆိုလည်း ဝမ်းသာရပါ သဗျား...၊း)
ဟုတ်တယ်နော်၊ သေခြင်းတရားက တကယ့်ကို လက်တကမ်းလေး မှာပဲ အမြဲရှိနေခဲ့တာ..၊ သတိလေး ကပ်ထားနိုင်မှာ တော်ကာကျမယ့် ခေတ်ပဲ...၊
ညီ့ရဲ့ မိသားစုတွေ အကြောင်း ဖတ်ရတိုင်း အားကျရ တယ်ဗျ၊ မောင်နှမတွေ အများကြီးနဲ့၊ သားသမီးတွေကို ချစ်တဲ့ အဘနဲ့အမေနဲ့..၊ အဲဒီ ငယ်ဘဝတွေက ဖတ်ရတဲ့ ကျနော်တို့တွေကို အခုထိ ပြုံးပျော်စေတုန်း၊း)
အခုခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖျာရောင်းနေတာတွေက ကလေး၊ လူကြီး အားလုံးအတွက် နေရာတကာ မှာပဲဗျာ..၊း) ရုပ်နဲ့စိတ်ကို မျှတအောင် မနည်းကြိုးစားရ မယ့်ပုံ...၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ မိဘတိုင်းက သားသမီးတိုင်းအတွက် လမ်းပြကြယ် ဖြစ်ချင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါဗျာ..၊
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတာ ကလေးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ မျိုးစေ့ချရမယ့် နှစ်ရှည်ခံပင် တမျိုးပါပဲ...၊
အဲဒါပါပဲဗျာ၊ ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ ရှိတုန်း မြန်လွန်းတဲ့ အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ သုံးတတ်ဖို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးနေရတယ်...၊း)
ဟုတ်တယ်နော်၊ သားသမီးတွေ အတောင်အလက် စုံတာကို မြင်ရတော့ မိဘအနေနဲ့ တဖက်က ဝမ်းသာရ သလို အခြားတဖက်ကလည်း ကိုယ့်ကို အရင်ကလောက် မလိုအပ်တော့တာ သတိပြုမိပြီး စိတ်မှာ တမျိုးတမည် ခံစားရမှာပဲ၊ ကြီးလာတဲ့ ကလေးကို ကြီးလာတဲ့အလျောက် ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲ ရှိတော့တာပါပဲ၊ မသက်ဝေတို့ မိသားစု အတွက်လည်း မင်္ဂလာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေဗျာ...။
သားလေးကြိးလာတာကို တစ်စိမ့်စိမ့် ကြည့်ရင်း တွေးမိတိုင်း လွမ်းနေရမယ့် ဖြတ်သန်းခဲ့သော အချိန်တစ်ချို့ကိုပေါ့... မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေအကိုရေ.....
ညကတည်းက ဖတ်ပြီးပြီးချင်းကွန်မန့်တင်နေတာ ဘယ်လိုမှ တင်မရလို့ ကိုညီလင်းရေ ... ။ ခုတလော ဘယ်မှာမှ ကွန်မန့်ပေးမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ရတာ အဖေတယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို အထင်းသားမြင်ရလို့ အဖေ့ကို အရမ်းသတိရသွားတယ်။ အဖေ ကျမကို မွေးတဲ့အချိန်မှာ သူ့အသက် ၂၆ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျမတို့အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ ငွေတွေ ခွန်အားတွေကို ဒီပို့စ်ဖတ်ရင်း ကျမ ပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်။ ခုချိန်မှာ အဖေ့အတွက် အချိန်တွေ ငွေတွေ ခွန်အားတွေ ကျမ ဘယ်လောက်များ ပြန်ပေးဆပ်နိုင်ပြီလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တွေးရင်း ရှက်ရွံ့ ကြေကွဲမိတယ်။ မိဘဆိုတာဟာ အပေးသမား သက်သက်တွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သားသမီးတွေက ပြန်လည်သိတတ်ဖို့ သိပ်ကိုလိုအပ်တာပေါ့ ... နော်။
နောင်တချိန် ကိုညီလင်းရဲ့ သားလေး ကြီးလာလို့ ကိုယ်က စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ပါးလာတဲ့အခါမှာ သားလေးဟာ ကိုညီလင်းအတွက် အချိန်တွေများကြီး ပြန်ပေးဆပ်လိမ့်မယ်လို့ ကျမ ယုံကြည်နေပါတယ်။
အဖေ့တယောက်ရဲ့မေတ္တာကို တွေ့ လိုက်ရတယ်..တန်ဖိုးကြီး အဝတ်အစားတွေ၊ အစားအသောက်တွေထက် မိဘအချိန်ပေးပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ ကလေးကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျော်ဆုံးကလေးဖြစ်မှာပါ..
ကိုညီ့ သားလေး ကံကောင်းတယ်..နှစ်သစ်မှာ ကိုညီ၊ မအိမ်သူ၊ သားလေးတို့ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ
သားသားအတွက် အားလပ်ရက်တွေ အချိန်ပေးခွင့်ရခဲ့တာ ကောင်းလိုက်တာ ကိုညီလင်းသစ်ရေ..။ မှန်လိုက်တာ..။ သူတို့နဲ့ နွေးထွေးပူးကပ်နေခွင့်တွေက တစ်ရက်ထက် တစ်ရက်နည်းလာတော့မှာ...။ အခုချိန်ထိတော့ အိမ်က သားပြည့်က ပူးကပ်ခံနေတုန်းပါဘဲ။ မိဘကိုယ်တိုင် ဖြစ်လာရမှ သိလာရတာတွေပေါ့။ ခေတ်ပျက် စနစ်ပျက်ကြီးထဲမှာ အသက်တွေ ကြီးလာမှာကိုတောင် စိုးရိမ်မိနေတယ်။
သားတစ်ယောက်အပေါ်ထားတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို အတိုင်းသား တွေ့လိုက်ရပါတယ်ရှင်..။
သားငယ်တယောက်ရဲ့ အဖေအနေနဲ့ ( ကိုညီလင်းသစ် စကားကို ငှားသုံးရရင် ) ဒါရိုက်ဟစ်တွေ အများကြီးပဲဗျ။
ခံစားချက် ပေါ်အောင် ရေးနိုင်ပါ့ဗျာ..
This post teaches me to beabetter parent for my lit' baby...
Many thanks... Let me share this post on FaceBook..
ကိုညီ့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေကိုအရမ်းလေးစားပါတယ်ဗျာ။ကိုညီ့ Blog လေးကိုလာရတာ တကယ့်ကိုညီတို့ အိမ်ကလေးကိုလာလည်ရသလိုပါပဲ။အသိပညာလည်းတိုးပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျာ။နှစ်သစ်မှာမိသားစုနဲ့အတူဆက်လက်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
သားနဲ့ တစ်နာရီလောက် ကစားပါနော် ဆိုတဲ့ စကားလေးပြောလိုက်ချိန်မှာ ဖြစ်နေမယ့် ကလေးလေးရဲ့ မျက်ဝန်းနဲ့ အံ့အားသင့် တုန်လှုပ်သွားမယ့် ဖခင်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မြင်ယောင်သွားမိတယ်.
သိပ်ကောင်းတဲ့ အက်ဆေးလေးပါပဲ ဘရားသားရေ...